Rajo kasoo iftiimaysa in ugu dambayn laga ‘heshiiyo’ muranka ka taagan doorashada | Hadalsame Media
Home Wararka Rajo kasoo iftiimaysa in ugu dambayn laga ‘heshiiyo’ muranka ka taagan doorashada
(Muqdisho) 21 Jan 2021 – Warar hordhac ah oo kasoo baxaya dhanka muranka ka taagan doorashada ayaa sheegaya inay u dhowadahay in xal laga gaaro in ugu yaraan uu dhoco shir lagu lafa guro meelaha ay isku diiddan yihiin Madaxtooyada, musharrixiinta iyo maamulladu.
Waxaa maalmihii lasoo dhaafay hadlay dhinacyada is haya oo kaddib kulamo khadeed ay la yeesheen beesha caalamka wada sheegay inay diyaar u yihiin in la iska af garto waxyaabaha la isku diiddan yahay.
Waxaa lala kulmay musharrixiinta oo sheegay inay xal diyaar u yihiin. MW Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa ugu dambeeyey dadka isku maandhaafsan doorashada isagoo kaddib markii uu khadka kula kulmay beesha caalamka sheegay inuu ogol yahay in xal la gaaro.
Waxaa hadda soo baxaysa neecow cusub oo ku saabsan kulan u dhaca sida ugu dhaqsaha badan, kaasoo la doonayo in lagu xalliyo meelaha lagu kala duwan yahay kaddibna lagu gaaro go’aanno lagu guda galo doorashada.
Dhanka kale, sida uu fahamsan yahay Hadalsame, Madaxtooyada oo u muuqata mid gidaarka soo taabatay, isla markaana garowsatay in aan la qaban karin doorasho hal dhinac ah ayaa la sheegayaa inay ogoshahay in la furo wareeg kale oo wada hadal ah.
Waxaa la sugayaa inuu dhoco kulan deg deg ah. Beesha caalamka ayaa wadda canaan, cadaadis iyo shirar ay ku doonayso in xal deg deg ah laga gaaro muranka doorashada oo ay ku tilmaameen mid aan ”aqbali karin.”
Previous articleTOOS u daawo: Juventus vs SSC Napoli, Fulham vs Man United, Alcoyano vs Real Madrid – LIVE (Shaxda Sugan)
Next article3 su’aalood oo ka dhashay dilka dhiillada leh ee Guddoomiye Dhegajuun???